Ikhaya » izithuba » Iindaba zeMibutho yoKhenketho » Ukhenketho lwase-Aruba kunye ne-Baseball Major Leaguer zikhuthaza ukuhamba "ngeXander Way"
Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
Ukhenketho lwase-Aruba kunye ne-Baseball Major Leaguer zikhuthaza ukuhamba "ngeXander Way"
Igunya lezoKhenketho lase-Aruba libhengeze namhlanje ubambiswano lonyaka wonke kunye neenkwenkwezi kunye ne-Aruban yemveli, iXander Bogaerts. Ukusebenza njengommeli werhwebo kwisiqithi seCaribbean, iBogaert iya kudlala indima ephambili kuthotho lomxholo uhambo oluya eAruba kunye nokukhuthaza iindwendwe ukuba zifumane esi siqithi "iXander Way."
Kuwo wonke amaphulo oLonwabo lweLigi eNkulu kunye noluhlu lweevidiyo, iBogaert ibonisa abalandeli bezemidlalo kunye nabakhenkethi ngokufanayo kwindawo yakhe ethi "Dushi Tera" (isiPapiamento "soMhlaba oMnandi"). Thatha uhambo ngeXander ngedolophu yakhe enemibala kunye nezobugcisa eSan Nicolas, ekwabizwa ngokuba yiSunrise City apho iindwendwe zinokuphonononga khona ubugcisa besitrato kwaye zifumane inkcubeko eyiyo yaseAruban.
"IAruba kum, ingaphezulu kwendawo endazalelwa kuyo kunye nekhaya lam, kulapho ndikwaziyo ukuphumla, ukunxibelelana nosapho, ukuloba nabahlobo, nokonwabela amanzi amahle," utshilo uBogaerts. "Ndonwabile ukusebenzisana ne-Aruba Tourism Authority ukubonisa abalandeli bam eBoston nakwilizwe liphela iindawo endizithandayo eAruba."
Olu luhlu lubonisa indawo ethandwayo nguXander ejikeleze iAruba ebhenela kuzo zonke iindidi zabahambi, kubandakanya ne-Eagle Beach yabathandi baselwandle, esandula ukulinganiswa kwindawo yesithathu kumabhaso e-TripAdvisor Travelers 'Choice ® ​​kwiiLwandle. Abahloli abanesibindi baya kukhuthazwa luhambo lukaXander oluya eSeroe Colorado, incam esemazantsi esiqithi enika umbono othe gabalala wonxweme lwaseAruba. IXander ikwatyelele iBaby Beach, intle yolwandle enesiqingatha senyanga enamanzi amahle aluhlaza kwithafa elizolileyo kunye neendawo zokutyela ezigqwesileyo eAruba eziqaqambisa izinto ezahlukeneyo zokutya ezikhoyo kwesi siqithi.
“Kuyasivuyisa ukuba nomnye woonyana bethu bomthonyama nomdlali webaseball odumileyo, uXander Bogaert azibandakanye nathi ekukhuthazeni iAruba ukuba ibe ngumhambi waseMelika. Amanzi amahle ase-Aruba, amalwandle acwengileyo kunye nomhlaba ongathi yintlango ubambe indawo ekhethekileyo ezintliziyweni zabo bonke abemi base-Aruba, kwaye asinakulinda ukwamkela abalandeli beXander abavela eBoston nakwihlabathi liphela ukuzokufumana i-One Happy Island yethu, utshilo uRonella Tjin UAsjoe-Croes, umphathi we-Aruba Tourism Authority.
Abalandeli baseAruba kunye neBogaert banokulandela iphulo kwimidiya yoluntu besebenzisa @arubatourism kwi-Instagram nakwi @aruba kuTwitter kunye ne-hashtag #XandersAruba ngalo lonke ixesha lebhola lezemidlalo ngamathuba okuphumelela uhambo oluya eXander's Happy Island.
Ngolwazi oluthe kratya okanye ukubona iAruba yeXander, ndwendwela aruba.com/xander.